कसरी जुर्‍यायो शिवशंकर रिजालको ‘जोगिन्दर’ उपनाम ? - Sankalpa Khabar
कसरी जुर्‍यायो शिवशंकर रिजालको ‘जोगिन्दर’ उपनाम ?
२७ आश्विन १६:४९
काठमाडाैं । जोगिन्दरको उपनामले परिचित शिवशंकर रिजालले हिमालय टेलिभिजन कार्यक्रम गर्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । ‘जोगिन्दर बोले प्रणामजी’को पहिलो एपिसोडमै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई अतिथि बनाएर मैनबत्ती बालेर कार्यक्रम गरेपछि उनी प्रस्तोताको रूपमा स्थापित नै भए ।
छायांकनमा अक्षय कुमारकाे ‘ओ माई गड २’
७ कार्तिक १४:२६
एमाले स्थायी कमिटी बैठक जारी, यस्ता छन एजेण्डा
४ कार्तिक १६:३८
महङ्गो भाडा असुल गर्ने १३ सवारीलाई कारबाही
७ कार्तिक ११:२४